Ohio WIC | JPMA, Inc.
Haddii aad ku cusub tahay WIC, fadlan ku bilow daawashada fiidiyowga hoose. Haddii aad u baahan tahay inaad la xiriirto shaqaalaha WIC, fadlan isticmaal 'Raadi rugta WIC”Xulashada barnaamijka ama wac Khadka Caafimaadka Qoyska 1-800-755-GROW (4769). Dhibaatooyin ma ku haysaa barnaamijka? Email JPMA ugu dir WICShopper@jpma.com
Miraha iyo Khudradda
Maskaxda ku hay in WICShopper uusan baari karin miraha iyo khudaarta darayga ah mararka qaarkoodna dukaamada waxay adeegsadaan baakado u gaar ah oo aan ku jirin liiska alaabooyinka la oggolaaday. Si kastaba ha noqotee, oo dhan gebi ahaanba, ka hor intaan la jarjarin, la jarjiray ama shakhsi ahaan shaqeynaya iyada oo aan lahayn suugo ama dips waa la ogol yahay. Waxaa jira xeerar kale, markaa tixraac liiska cuntadaada ee barnaamijka wixii faahfaahin dheeraad ah.
Isu dheelitirka dheefteyda
Barnaamijka 'WICShopper' wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la socoto faa'iidooyinkaaga WIC iyo inaad iskaan ku sameysid alaabada ka soo horjeedda dheefahaaga hadhay si loo hubiyo inaadan wax dhibaato ah ku qabin diiwaanka. Haddii aadan weli diiwaangelin kaarkaaga eWIC, taabo badhanka 'Faa'iidooyinkayga' si aad u bilowdo!
Ogeysiis muhiim ah: Faa'iidooyinka aad aragto dib baa loo dhigay illaa hal maalin. Hubso inaad hubiso dusha sare ee shaashadda dheefahaaga si aad u aragto goorta faa'iidooyinka loo soo raray WICShopper. Maskaxda ku hay in safarada wax iibsiga ee waqtigaas ka dib AANAY ka muuqan doonin dheelitirka dheeftaada!
Ka dib diiwaangelinta kaarkaaga, waxaad awoodi doontaa inaad fiiriso macaashkaaga hadhay adigoo taabanaya badhanka "Faa'iidooyinkayga". Markaad iskaanaysid alaabooyinka, barnaamijku wuxuu kuu sheegayaa haddii sheygu WIC u qalmo iyo haddii aad faa'iidooyin u leedahay inaad iibsato alaabta. Marka hore, taabo badhanka cusub ee "Faa'iidooyinkayga" ee geeska kore ee midig ee shaashadda weyn:
Shaashadan waxaad ka dhejin kartaa qayb ka mid ah faa'iidooyinkaaga si aad u aragto oo aad u raadsato alaabada aad iibsan karto, u aragto cuntada sida loo sameeyo alaabooyinka ku jira qaybtaas ama isticmaal xisaabiyaal kaa caawiya inaad sare u qaaddo iibsiyadaada qaybtaas!
eWIC Q & A
Q: Maxaan sameeyaa haddii kaarkayga uu lumo, la xado ama waxyeello soo gaadhay?
A: U qaado Aqoonsigaaga sawirka rugtaada caafimaadka ee WIC oo aad isla markiiba soo sheegto! Waxaa jiri doona muddo sugitaan kahor intaadan helin kaar lumay, xaday ama dhaawacmay.
Q: Maxaan sameeyaa haddii kaarkayga la xiro?
A: Haddii kaarkaagu uusan shaqeynin sababtoo ah waa la xiray, waxaad u tagi kartaa rugta caafimaadka WIC oo leh aqoonsi sawir leh iyo shaqaalaha xarunta ayaa kuu furi doona.
Q: Sideen ku heli karaa waxtarrada WIC ee WIC Nutrition Nutrition (WNC)?
A: Cunnooyinkaaga WIC waxaa lagu shubi doonaa WNC-gaaga inta lagu jiro booqashadaada rugta caafimaad. Mar haddii rugta caafimaadku ku rarto kaararkaaga cuntada WIC, isla markiiba waad dukaameysan kartaa. Markaad iibsato cunnooyinkaaga WIC, waxaa lagaa qaadayaa dheelitirka cuntada ee kaarkaaga ku jira.
Q: Sideen ku ogaanayaa miisaankayga?
A: Waxaad ku isticmaali kartaa hawsha "Qabashada Qabashada" ee WICShopper inay ku sawiraan rasiidhka baaqigaaga eWIC markasta oo aad wax adeegato. Waxa kale oo aad ka hubin kartaa dheelitirkaaga rugtaada caafimaadka ee WIC iyo miiska adeegga ama lacag bixinta dukaanka.
Q: Maxaan ku sameeyaa kaarkayga ka dib marka la iga faa'iideysto manfacyada?
A: WNC dib ayaa loo isticmaali karaa. Kaydi WNC-gaaga oo u qaado ballantaada WIC ee xigta si alaabtaada cuntada cusub aad ugu rarto.
Q: Maxaa dhacaya haddii aan iloobo PIN?
A: Waxaad dib u qabsan kartaa PIN-kaaga rugta caafimaadka ee soo saartay kaarka.
Soo hel Wakhtarka WIC
Waxaa jira xafiisyada 200 WIC ee ku yaal Ohio. Si aad u hesho xafiiska WIC ee kuu dhow:
Wac Khadka Caafimaadka Qoyska 1-800-755-GROW (4769)
Markasta hubi cuntadaada ka hor intaadan dukaanka.
Baadh alaabta ku jirta barnaamijka WICShopper si loo hubiyo inay u qalmaan WIC. Xusuusnow inaad xaqiijiso inaad runti leedahay faa'iidooyinka aad ku iibsaneyso sheyga!
Isticmaal liistada Cuntada WIC ee Ohio (AFL) ee WICShopper (ama aad daabacan tahay) si aad u aragto cuntada WIC ee aad ka iibsan karto.
Waxaad soo iibsataa bakhaarada dukaanka, dukaanka iibka iyo khaas ahaan, waxaadna isticmaashaa shirkadaha iyo tigidhada.
Soo iibso waxaad u baahan tahay. Uma baahnid inaad iibsato dhamaan cuntooyinkaaga hal mar.
Oggol - Sheygan WIC wuu u qalmaa! Hal shay oo ah in la ogaado waa inaad arki kartaa shay la oggol yahay, laakiin ma ahan qayb ka mid ah dheefahaaga cuntada ee WIC, marka ma iibsan kartid WIC. Tusaale ahaan, hooyo si buuxda u nuujisa ayaa hesha kalluunka qasacadaysan. Haddii haweeney si buuxda u nuujisa aysan ku jirin qoyskaaga, kalluunka qasacadaysan kama mid noqon doono faa'iidooyinkaaga cuntada ee WIC, mana awoodi doontid inaad ka iibsato kalluunka qasacadaysan diiwaanka.
Faa'iidooyin U Qalma - Tani waxay ka dhigan tahay inaad iskaanisay shey u qalma WIC, laakiin kama mid aha gargaarkaaga cuntada WIC, marka ma iibsan kartid WIC. Tusaale ahaan, cunug hal sano jir ah ayaa hela caano dhan. Haddii aadan ku haysan cunug hal sano jir ah qoyskaaga, caanaha oo dhan kama mid noqon doonaan faa'iidooyinkaaga cuntada ee WIC, mana awoodi doontid inaad ku iibsato caano dhan diiwaanka.
Ma aha wax WIC ah - Tan macnaheedu waa WIC ma aysan ansixin sheygan. Haddii aad u maleyneyso inaad awood u leedahay inaad ku iibsato cunnadan gargaarka cuntada ee WIC, noo soo sheeg adigoo isticmaalayaTani ma iibsan karto!"Button ee app this.
Lama aqoonsan karo - Tani macnaheedu waa in abku uusan go'aansan karin haddii sheygu u qalmo WIC. Tan waxaa u sababi kara isku xirnaanta dukaanka. Isku day inaad ku xidho WiFi ama aad ka hesho meel dukaanka ah oo aad adeeg fiican ka hesho.
Xilliga lacag bixinta
Isticmaal safeeyaha baaritaanka ee aqbala WNC. Haddii aadan hubin, weydii shaqaalaha dukaanka.
Ka kala sooc cuntada cuntooyinka WIC.
Ku rid WNC-kaaga akhristaha kaararka markii uu dukaanka kaa codsado. U hubso inaad gashid PIN afarta lambar ee saxda ah. Kaarkaaga waa la xirayaa haddii PIN-kaaga si khalad ah loo galo in ka badan toddoba jeer. Haddii uu kaarkaagu xirmo, waa inaad qaadataa aqoonsiga sawirkaaga (ID) oo aad ku noqotid kiliiniga WIC halkaasoo kaarkaaga loo soo saaray si uu u furo.
Markaad WNC ka dhigto akhristaha kaadhka oo aad geliso PIN sax ah, rasiidhadaada bilawga ah ee Dakhliga Bilowga ayaa daabacaya.
Kadib ka dib dukaanku wuxuu eegayaa dhamaan cuntadaada, waxaad heli doontaa risiitada WIC Cuntada la iibsaday ama waxaa laga codsanayaa in ay dib u eegaan shaashadda muujinta waxyaalaha WIC ee aad soo gadatay. Hubi keliya waxyaabaha aad soo iibsatay ayaa liis gareynaya qiimaha saxda ah.
Khasnajiga ayaa kuu sheegi doona goorta ay nabdoon tahay inaad kaarkaaga ka saarto akhristaha kaarka dhammaadka macaamilkaaga. Riix "Haa" si aad u aqbasho macaamilka WIC ama "Maya" si aad u diiddo. Wax isbadal ah lama samayn karo mar aad riixdo "Haa".
Dhamaadka iibsashadaada, waxaad ka heli doontaa warqadda kaarka dhamaada ee kaararka. Hayso risiitadan si aad u ogaanaysid faa'iidooyinka cuntada ee aad ka tagtay bishaan socdaalka socdaalka socdaalka.
Kaarka dukaanka ayaa kuu sheegi doona goorta ay nabdoon tahay in kaarkaaga laga saaro akhristaha kaarka dhamaadka macaamilkaaga.
Hayso WNC-kaaga meel amaan ah. Ku daawee WNC-gaaga sida kaararka deynta ama lacag caddaan ah.
Nabadgelyadaada nabad ilaalinta Ha la wadaagin lambarkaaga PIN qof kasta oo aadan rabin isticmaalka kaarkaaga.
Ha ku haynin lambarkaaga PIN ee boorsadaada ama boorsadaada.
Ha leexin, jarin ama qorin kaarkaaga. Nadiifi oo qalaji.
Ha iibin, ha ka ganacsan ama ha siinin lambarkaaga PIN ama kaarkaaga. Ku takrifalka dheefaha WIC waa dambi.
A: "Tani ma iibsan karto!"Waxay kuu oggolaanaysaa inaad u sheegto WIC marka sheyga cuntada aad isku dayeyso inaad iibsato waxaa diidaya diiwaanka. Markaad isticmaasho, "Tani ma iibsan karto!"Ee barnaamijka WICShopper, waxaan ka helaynaa ogaysiis xafiiska WIC ee Gobolka. Waxaan dib u eegeynaa dhammaan waxyaalihii aad noo sheegto oo aad la shaqeysid dukaamada si aad ugu oggolaato cuntooyinka laguu oggol yahay!